Canada Mukuru wePublic Health Officer Anoburitsa New Update paCOVID
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Dzvanya apa kana iri pepanhau rako! » Canada Mukuru wePublic Health Officer Anoburitsa New Update paCOVID
Denda reCCIDID-19 rinoramba richigadzira kushushikana uye kusagadzikana kune vazhinji vekuCanada, kunyanya avo vasina kugadzirira kuwana kune yavo yenguva dzose yerutsigiro network. Kuburikidza neWellness Together Canada yepamhepo portal, vanhu vemazera ese munyika yose vanogona kuwana nekukurumidza, mahara uye zvakavanzika hutano hwepfungwa uye kushandisa zvinodhaka, maawa makumi maviri nemana pazuva, mazuva manomwe pasvondo. Hezvino izvo Chief Public Health Officer aifanira kutaura nhasi:
Iyo Public Health Agency yeCanada (PHAC) inoenderera mberi nekutarisa COVID-19 epidemiological zviratidzo kuti ikurumidze kuona, kunzwisisa uye kutaura nyaya dziri kubuda dzekunetsa. Nhasi, ndapa chiziviso pamusoro penyika yedenda uye modhi. Inotevera ipfupiso pfupi yemhedzisiro yekuenzanisira uye neazvino nhamba dzenyika uye maitiro.
Yemazuva ano yakagadziridzwa yakareba-renji yekumisikidza inoratidza kuti wave yechina inogona kuramba ichidzikira mumavhiki anouya kana kutapurirana kukasawedzera. Nekukosha kweiyo yakanyanya kutapukira yeDelta musiyano, iyo fungidziro yerefu-refu inoramba ichisimbisa kukosha uye kunobatsira kwemaitiro ehutano hweveruzhinji uye kungwarira kwemunhu, kunyangwe padanho razvino rekuvharirwa. Tichiri kuenderera mberi nekuona zviratidzo zvakanaka, nyaya dzinogona kutanga kusimuka zvakare nekungowedzera zvishoma kwekutapurirana. Izvi zvinoratidza kuti panogona kunge paine mabhambu munzira yedu yeCCIDID-19 uye mwedzi yechando inogona kuunza mamwe matambudziko sezvo mamwe hutachiona hwekufema huchidzoka, asi tinoziva kuti maitiro emunhu anoshanda kudzikisa hutachiona uye kudzivirira kubva kune zvakakomba mhedzisiro kubva kuCOVID-19. pamwe nemamwe utachiona hwekufema.
Kubva pakatanga denda iri, kwave ne1,725,151 nyaya dzeCCIDID-19 uye 29,115 dzakataurwa muCanada. Idzi nhamba dzinowedzera dzinotiudza nezvehureme hwehurwere hweCCIDID-19 kusvika pari zvino, nepo huwandu hwenyaya dziri kushanda, iko zvino pa23,162, uye mazuva manomwe anofamba anoratidza chiitiko chazvino chechirwere uye kuomarara maitiro.
Munyika, chiitiko chechirwere cheCCIDID-19 chiri kuramba chichidzikira, neavhareji ye2,231 nyaya nyowani dzinotaurwa zuva nezuva mukati memazuva manomwe apfuura (Oct 7-Nov 29), kudzikira kwe4% zvichienzaniswa nesvondo rapfuura. Kuiswa muchipatara uye maitiro ekurapwa akanyanya, anonyanya kusanganisira vanhu vasina kubayiwa, ari kudzikira munyika yose asi anoramba akasimudzwa. Yazvino data yedunhu nedunhu inoratidza kuti avhareji yevanhu 5 vane COVID-1,934 vairapwa muzvipatara zveCanada zuva rega rega mukati memazuva manomwe achangopfuura (Oct 19-Nov 7), iyo yakaderera ne29% pane svondo rapfuura. Izvi zvinosanganisira, paavhareji, vanhu mazana mashanu nemakumi mapfumbamwe nevashanu vairapwa munzvimbo dzevanorwara zvakanyanya (ICU), 4% pasi pesvondo rapfuura uye avhareji yenzufu makumi maviri nenomwe dzakataurwa zuva nezuva (Oct 8-Nov 595). Pamwe chete nekugara muchipatara kwenguva refu nhamba idzi dzichiri dzakakwira dzinoramba dzichiisa dambudziko rakawanda pazvinhu zvehutano zvemuno, kunyanya uko huwandu hwehutachiona hwakakwira uye huwandu hwekudzivirira hushoma.
Munguva iyi yechina wave yeCOVID-19 denda muCanada, hutachiona uye zvakakomba mhedzisiro zvine akati wandei akakosha maficha:
• Munyika yose, Delta Variant of Concern (VOC) inotapukira zvakanyanya, inobata ruzhinji rwenyaya dzichangotaurwa, ine chekuita nekuomarara, uye inogona kuderedza kushanda kwemishonga.
• Mhosva zhinji dzakataurwa, kuchipatara uye kufa kuri kuitika pakati pevanhu vasina kubayiwa
• Hutachiona hwakapararira munzvimbo dzine nhomba yakaderera inopa njodzi inoenderera mberi yekubuda nekutsiviwa nemaVOC matsva, kusanganisira njodzi yemaVOC nekukwanisa kunzvenga kudzivirirwa kwejekiseni.
Zvisinei nekuti SARS-CoV-2 musiyano wei uri kutonga munzvimbo, tinoziva kuti kubaya, pamwe chete nematanho ehutano hweveruzhinji uye maitiro ega ega, ramba uchishanda kuderedza kupararira kwechirwere uye zvakakomba mhedzisiro. Kunyanya, humbowo hunoenderera mberi nekuratidzira kuti yakazara-dosi-maviri akatevedzana eHealth-Canada akatenderwa eCCIDID-19 vaccine inopa dziviriro yakakura kubva kuchirwere chakakomba, kunyanya pakati pemapoka madiki. Zvichienderana nedata richangoburwa kubva kumapurovhinzi gumi nemaviri nematunhu kune vanhu vanokodzera, makore gumi nemaviri kana kupfuura, mumavhiki apfuura (Gunyana 12 - Gumiguru 12, 19) uye kugadzirisa zera, avhareji yemitengo yevhiki nevhiki inoratidza kuti vanhu vasina kubayiwa vangangove zvakanyanya. vapinzwa muchipatara neCOVID-16 zvichienzaniswa nevanhu vakabayiwa zvizere.
• Pakati pevechidiki nevakuru vane makore gumi nemaviri kusvika pamakumi mashanu nemapfumbamwe, vanhu vasina kubayiwa vanga vachikwanisa kupinda muchipatara neCOVID-12 pane vanhu vakabayiwa zvizere.
• Pakati pevakuru vane makore makumi matanhatu kana kupfuura, vanhu vasina kubayiwa vanga vachikwanisa kupinda muchipatara neCOVID-60 pane vanhu vakabayiwa zvizere.
Kubva muna Mbudzi 4, 2021, mapurovhinzi nematunhu vakapa mishonga inodarika miriyoni makumi mashanu nesere ekudzivirira kweCCIDID-58, iine data redunhu nedunhu razvino rinoratidza kuti vanopfuura makumi masere nepfumbamwe muzana vevanhu vane makore gumi nemaviri kana kupfuura vawana dosi rimwe chete reCOVID-19. 89 uye vanopfuura 12% vava kubaiwa zvizere. Zera-yakanangana yekuvhara data yekudzivirira, kubva muna Gumiguru 19, 84, inoratidza kuti vanopfuura makumi masere nemasere muzana evanhu vane makore makumi mana kana kupfuura vane dosi rimwe chete uye vanopfuura makumi masere nemana muzana vanobaiwa zvizere, ukuwo 30-2021% yevakuru vechidiki vane makore 88-40. makore ane kamwechete kamwe chete uye asingasviki 84% vanobaiwa zvizere.
Sezvo zvakawanda zvezviitwa zvedu zvinofamba mumba, kudonha uku uye chando, isu tinofanirwa kuyedza kuti tive nevanhu vazhinji vanokodzera sezvinobvira vabaiwa nhomba yeCOVID-19 nekukurumidza sezvinobvira kuti tizvidzivirire isu nevamwe, kusanganisira avo vanogona kusaisa simba rekudzivirira immune. kana kuti ndiani asingakwanisi kubayiwa. Kushandisa nguva uye kwakanangwa matanho ehutano hweveruzhinji uye kuchengetedza maitiro ekudzivirira ega ega kuchave kwakakosha kudzikisa huwandu hwehutachiona hweCCIDID-19 uye kudzikisira kukanganisa kwehutano hwehutano. Kunyange dziviriro yedu kubva kuCOVID-19 yakatsigirwa nemishonga, isu tinofanirwa kufunga nezve kudzoka kwezvimwe zvirwere zvekufema. Tinogona kugara takagwinya nekufambirana nenguva nemishonga inokurudzirwa, yakadai sefuruwenza uye mamwe majekiseni ekudzivirira evana nevakuru uye nekuchengetedza matanho anobatsira anonotsa kupararira kweCOVID-19 pamwe nehumwe hutachiona hwekufema.
Ipo COVID-19 ichiri kutenderera muCanada uye nepasirese, maitiro ehutano hweveruzhinji anoramba akakosha: gara pamba / wega wega kana uine zviratidzo; ziva nezvenjodzi dzine chekuita nehurongwa hwakasiyana; tevera mazano ehutano hweveruzhinji uye chengetedza maitiro ekudzivirira ega. Kunyanya, kureba kwemuviri uye kupfeka nemazvo yakanyatsokodzera uye yakanyatsogadzirwa kumeso kwemask kunopa mamwe matanho ekudzivirira ayo anowedzera kuderedza njodzi yako muzvirongwa zvese, pamwe nekuwana mhepo yakanakisa inogoneka munzvimbo dzemukati.